ခငျပှနျးဖွဈသူနဲ့ ဘယျလိုမြိုး ဖူးစာဆုံခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ပွောပွလာတဲ့ အဆိုတျော ယုဇန – Focus Myanmar
Last modified date September 13, 2020
အဆိုတော့ ယုဇနကတော့ 90’s born. တှကွေားနာမညျကွီးသလို ယနထေ့ကျတိုငျ ပရိသတျတှကွေား ရဲ့ခဈြခွငျးကိုရရှိနသေူတဈဦးပါ ယခုရကျပိုငျးမှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ The Voice Myanmar Season3မှာလညျး ယုဇနဟာ ပွိုငျပှဲဝငျဟနျဆောငျပွီး Surprise လုပျကာ ပရိသတျတှကေိုဖြျောဖွခေဲ့ပါသေးတယျ
ယုဇနဟာ အခုခြိနျမာတော့ ခငျပှနျးဖွဈသူနဲ့အတူ ဘဝကို အေးခမျြးစှာဖွတျသနျးနတောပါ ယခုရကျပိုငျးမီဒီယာတှဆေုံ့မှုတဈခုမှာတော့ ယုဇနက သုမနဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူတို့ဖူးစာဆုံဖွဈခဲ့ပုံကို ပွော့ပလာခဲ့ပါတယျ
“ဩစတွေးလမြှာ သီခငျြး သှားဆိုရငျး ခငျပှနျးသညျ နဲ့ ဆုံခဲ့တာပါ။ သူ KeyBoard တီးနတောကို မွငျပွီး သဘောကြ ခဲ့သလို သူကလညျး အဈမ သီခငျြး ဆိုတာကို သဘောကခြဲ့တယျ။ နှဈယောကျလုံး က ဂီတ လမျးကွောငျးပျေါမှာ မွငျပွီး ဆုံဆညျးခဲ့ကွတာမို့ နှဈယောကျ အတူ သီခငျြးတှေ ဖနျတီး ဖွဈတယျ” လို့ သူမခငျပှနျးနဲ့ဆုံဖွဈခဲ့ပုံကို ပွောပွာလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ
ယုဇနခငျပှနျးဖွဈသူ ကိုသိနျးထိုကျအောငျဟာ The Voice Myanmar မှာ သူ့ရဲ့ Band နဲ့အတူ Keyboard တီးပွီးဖြျောဖွနေတောဖွဈပွီး ဒီအကွောငျးကို ယုဇနက ” The Voice မှာဆို အကိုတို့ဝိုငျးက ပငျတိုငျတီးနတောပေါ့နျော နောကျတခွားပှဲတှမှောလညျးသူတီးနပေါပွီ The Voice မှာသီခငျြးလာဆိုတဲ့နတေု့နျးကတောငျမှ အမစိုးရိမျမိသေးတယျ တခြို့ပရိသတျတှကေ The Voice မှာ Keyboard တီးနတေဲ့ ကိုသိနျးထိုကျအောငျက အမ အမြိူးသားမှနျးမသိကွဘူး အဲ့ဒါကို အမက ကိုသိနျးထိုကျအောငျကို ရှေးပါတယျဆိုပွီး ပွောလိုကျတော့ တခြို့ပရိသတျကတော့ အမကိုဘယျလိုထငျမလဲဆိုကွီးစိတျပူနတော တယျေသေးတယျ ကြားပေါကျကွီးက ဒါ မယုဇနရဲ့အမြိုးသားပါလို့ ပွောပေးလိုကျလို့ ” ဟု ပွောပွလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ
ယုဇနကတော့ သူမနဲ့အတူ အနုပညာလမျးကွောငျးမှာလြှောကျလှမျးနတေဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူအကွောငျးပွောပွခဲ့တာပါ ပရိသတျကွီးရေ
ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး ဖူးစာဆုံခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော် ယုဇန
အဆိုတော့ ယုဇနကတော့ 90’s born. တွေကြားနာမည်ကြီးသလို ယနေ့ထက်တိုင် ပရိသတ်တွေကြား ရဲ့ချစ်ခြင်းကိုရရှိနေသူတစ်ဦးပါ ယခုရက်ပိုင်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ The Voice Myanmar Season3မှာလည်း ယုဇနဟာ ပြိုင်ပွဲဝင်ဟန်ဆောင်ပြီး Surprise လုပ်ကာ ပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါသေးတယ်
ယုဇနဟာ အခုချိန်မာတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့အတူ ဘဝကို အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေတာပါ ယခုရက်ပိုင်းမီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာတော့ ယုဇနက သုမနဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို့ဖူးစာဆုံဖြစ်ခဲ့ပုံကို ပြော့ပလာခဲ့ပါတယ်
“ဩစတြေးလျမှာ သီချင်း သွားဆိုရင်း ခင်ပွန်းသည် နဲ့ ဆုံခဲ့တာပါ။ သူ KeyBoard တီးနေတာကို မြင်ပြီး သဘောကျ ခဲ့သလို သူကလည်း အစ်မ သီချင်း ဆိုတာကို သဘောကျခဲ့တယ်။ နှစ်ယောက်လုံး က ဂီတ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ မြင်ပြီး ဆုံဆည်းခဲ့ကြတာမို့ နှစ်ယောက် အတူ သီချင်းတွေ ဖန်တီး ဖြစ်တယ်” လို့ သူမခင်ပွန်းနဲ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပုံကို ပြောပြာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ယုဇနခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုသိန်းထိုက်အောင်ဟာ The Voice Myanmar မှာ သူ့ရဲ့ Band နဲ့အတူ Keyboard တီးပြီးဖျော်ဖြေနေတာဖြစ်ပြီး ဒီအကြောင်းကို ယုဇနက ” The Voice မှာဆို အကိုတို့ဝိုင်းက ပင်တိုင်တီးနေတာပေါ့နော် နောက်တခြားပွဲတွေမှာလည်းသူတီးနေပါပြီ The Voice မှာသီချင်းလာဆိုတဲ့နေ့တုန်းကတောင်မှ အမစိုးရိမ်မိသေးတယ် တချို့ပရိသတ်တွေက The Voice မှာ Keyboard တီးနေတဲ့ ကိုသိန်းထိုက်အောင်က အမ အမျိူးသားမှန်းမသိကြဘူး အဲ့ဒါကို အမက ကိုသိန်းထိုက်အောင်ကို ရွေးပါတယ်ဆိုပြီး ပြောလိုက်တော့ တချို့ပရိသတ်ကတော့ အမကိုဘယ်လိုထင်မလဲဆိုကြီးစိတ်ပူနေတာ တေယ်သေးတယ် ကျားပေါက်ကြီးက ဒါ မယုဇနရဲ့အမျိုးသားပါလို့ ပြောပေးလိုက်လို့ ” ဟု ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ယုဇနကတော့ သူမနဲ့အတူ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာလျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအကြောင်းပြောပြခဲ့တာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ
GOT ဇာတ်သိမ်းပိုင်းအတွက် ဟစ်တလာ မိန့်ခွန်းတွေကို ကြည့်ပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့ Emilia Clarke
အလငျးအမှောငျကို သဘာဝဆနျဆနျသုံးထားပွီး ကယျြဝနျးခနျးနားတဲ့ တိုကျကွီးကို ပွသလိုကျတဲ့ အောငျလနဲ့ ဝိုငျးစုခိုငျသိနျး
“ဟစ်တိုင်”ကို ဝတ္ထုဖတ်ချိန်ကတည်းက ရင်ထဲဆို့နင့်နေလို့ နားပြီးမှ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
ရပျကှကျလမျးတှေ ပိတျဆို့ကာရံမှုမလုပျဖို့ရနျကုနျ ကိုဗဈကျောမတီ တားမွဈ
စိတျမကောငျးစရာအဖွဈအပကျြလေးတဈခုကွောငျ့ပရိသတျတှနေဲ့ဝေးကှာနရေတဲ့ မွနျမာအိုငျဒေါက ထကျအဉ်စလီ